U-doodayaasha Socdaalka, Sharci-dejiyayaasha, Hoggaamiyeyaasha Bulshada waxay ugu baaqayaan Xog Qarsoodi ah Ilaalinta Asturnaanta ee Coloradans - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Ku soo biir CIRCle-ka Asxaabta
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > U-doodayaasha Socdaalka, Sharci-dejiyeyaasha, Hoggaamiyeyaasha Bulshada waxay ugu baaqayaan Xog Qarsoodi ah Ilaalinta Asturnaanta ee Coloradans
U-doodayaasha Socdaalka, Sharci-dejiyeyaasha, Hoggaamiyeyaasha Bulshada waxay ugu baaqayaan Xog Qarsoodi ah Ilaalinta Asturnaanta ee Coloradans
Contact: Ian Pham ama 713-679-0948
Sharciga soo socda ayaa abuuri doona nidaam isdaba-joog ah oo loogu talagalay codsiyada macluumaadka shakhsi ahaaneed in la soo gudbiyo, la hubiyo, lana siiyo marka ay habboon tahay
Denver, CO - Maanta, hoggaamiyeyaasha sharci dejinta iyo u doodayaasha bulshada soogalootiga ah waxay ku dhawaaqeen inay taageerayaan sharciga soo socda ee ilaalin doona macluumaadka aqoonsiga shakhsi ahaaneed ee Coloradans ay la wadaagayaan gobolka markay helayaan adeegyada hay'adda gobolka inta lagu jiro shir jaraa'id oo ay ku jiraan horyaallada sharci dejinta, u doodayaasha socdaalka, iyo hoggaamiyeyaasha bulshada.
Sharciga, oo ay kafaala qaadeen Senator-ka Gobolka Julie Gonzales (D-Denver) iyo Wakiilka Serena Gonzales-Gutierrez (D-Denver), ayaa looga golleeyahay in lagu soo celiyo kalsoonidii u dhaxeysay bulshada soogalootiga ah ee Colorado iyo gobolka. Ka dib markii la helay Sharciga Diiwaanada Furan ee 'Colorado Open Records Act' (CORA) ee ay codsadeen Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC), kalsoonidan ayaa la jebiyey iyada oo natiijooyinku muujiyeen xiriir joogto ah oo ula kac ah oo u dhexeeya shaqaalaha Waaxda Gawaarida ee Colorado (DMV) iyo wakiillada Socdaalka iyo Kastamka (ICE) . In ka badan 200 emayl ayaa muujinaya shaqaalaha qeybta baaritaanka khiyaanada DMV ee u shaqeeya saraakiisha socdaalka ee aan rasmiga aheyn iyagoo si firfircoon uga caawinaya ICE inay aqoonsato, ilaaliso oo ay xirto shaqsiyaadka - xaaladaha oo dhan iyadoon lahayn waaran, amar ama amar qabasho.
Wadaagistaan ​​macluumaadka aan la fasaxin ayaa xaqiijisay cabsida ugu daran ee bulshada soo galootiga ah, kuwaas oo ku aaminay adeegyada dowlada iyagoo la wadaagay macluumaad xasaasi ah si loo helo laysanka darawalnimada sida uu dhigayo SB13-251. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa amniga dhammaan Coloradans. Badhasaabka Polis iyo hogaan cusub oo ku dhex jira DMV waxay sameeyeen isbadal maamul oo la taaban karo si wax looga qabto dhaqamada wadaaga xogta aan la ogolayn Tilmaamaha Guddoomiyaha Polis ee Xogta Asturnaanta, oo la saxeexay Maajo 2020, waxay dejisay ku-dhaqanno xog isdaba-joog ah oo ku saabsan xogta asturnaanta ee waaxaha gobolka Colorado waxayna abuurtay xaddidaad ku saabsan codsiyada macluumaadka shakhsiyeed. Hadda, sharci-dajiyayaashu waxay raadinayaan inay xoojiyaan isbeddeladaas oo ay ka dhigaan kuwo joogto ah xagga sharciga.
Intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee maanta, kaqeybgalayaashu waxay ku baaqeen in si dhaqso leh loo maro mar hadii sharciga la soo bandhigay. Hadlayaashu waxay iftiimisay xaqiiqda ah in dhaqammada dhiirrigeliya wadaagista xogta aan loo baahnayn ay halis gelinayaan nabadgelyada dadweynaha isla markaana kobciyaan jawi cabsi ah oo u kaxeeya qaar ka mid ah xubnaheenna bulshada ugu nugul hooska hoose. Waxay hoosta ka xarriiqeen muhiimadda ay leedahay soo celinta kalsoonida bulshada guud ahaan amniga Coloradan iyo jawaabtayada COVID-19, maadaama kalsooni darrida ay ka niyad jabineyso bulshada soogalootiga ah helitaanka adeegyada muhiimka ah, sida shatiyada wadista baabuurta, raadinta xiriirka, iyo tallaalada.
Sharciga la soo jeediyay wuxuu cadeynayaa in macluumaadka shaqsiyeed iyo midka gaar ahaaneed ee shakhsiyadeed aan lala wadaagi karin hay'adaha ka baxsan ujeedada fulinta ujeedada socdaalka madaniga ah waana dadaal lagu doonayo in lagu soo celiyo aaminaadan muhiimka ah. Looma baahna in Coloradan ay ka baqaan in macluumaadka ay siiyaan gobolka loo adeegsado iyaga ka dhanka ah.
Haddii aad xiiseyneyso inaad la hadasho mid ka mid ah kaqeybgalayaasha dhacdada ama aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codsiga CORA ee la soo sheegay, fadlan emayl Ian Pham.
Intaa waxaa sii dheer, hoosta fadlan ka hel xigashooyin xul ah shirkii jaraa'id ee maanta oo ku saabsan muhiimadda soo celinta kalsoonida bulshada iyada oo loo marayo sharcigan dhowrista macluumaadka asturnaanta:
Senator-ka Gobolka Julie Gonzales (D-Denver):
“Kalsoonidii ka dhaxeysay bulshada iyo gobolkayaga ayaa jabay. Waxaa lagu burburiyey qaladaadka ICE. Anagana waxay nagu xiran tahay, gobolka Colorado, dowladdeena gudaheeda, si aan ugu soo celino kalsoonidaas biilkan. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan awoodnay inaan la shaqeyno, sanadkii la soo dhaafay oo dhan, hay'adaha, bulshada, iyo gudoomiyaha, si aan u marinno hagitaan anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha. Haatan, aniga iyo saaxiibkey Wakiilka Serena Gonzales-Guttierez iyo waxaan soo bandhigeynaa sharci cusub oo lagu sharxayo tilmaamahaas si loo soo celiyo kalsoonida loona ilaaliyo asturnaanta macluumaadka ay Coloradans u siiyeen dowladdeena. ”
Wakiilka Gobolka Serena Gonzales-Gutierrez (D-Denver):
"Dib-u-dhiska kalsoonida hadda waa mid aad iyo aad muhiim u ah, ma ahan oo keliya sawirka weyn, laakiin xitaa hadda hadda maaddaama qaybinta tallaallada ay socdeen. Waxaan sii wadeynaa inaan aragno kala duwanaanshaha cidda dhab ahaan qaata tallaalka. Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen aragnay warbixinnada, iyo markale bulshooyinka soogalootiga ah waxay kamid yihiin heerarka ugu hooseeya ee qaata tallaalka oo ay wehliyaan dadka midabka iyo bulshada dakhligoodu hooseeyo Waxaan si adag u aaminsanahay in jaaliyadaha soo galootiga ay tahay inay u fududahay helitaanka talaalka sida dadka kale. Xukuumadana, gobolka Colorado waa inay ka shaqaysaa sidii ay dib ugu soo ceshan lahayd kalsoonida xubnaha beesheena oo aad in badan looga tagay bill Hindise sharciyeedkan ayaa ilaalin doona dadka Coloradans si kalsoonida dib loogu dhiso bulshadayada. ”
Siena Mann, Maamulaha Ololaha ee CIRC: Baahida loo qabo sharcigan ma noqon karin mid deg deg ah. 150,000 oo Coloradans ah oo qaatay liisanka darawalnimada ama kaarka aqoonsiga tan iyo markii la marsiiyey SB-251 waxay u hogaansameen nidaamka adag ee sharcigu dhigayo, iyagoo si daacadnimo leh ula wadaagaya macluumaadkooda dowladda gobolka. Qaar ka mid ah, macluumaadkooda ayaa markaa ka dib iyaga hub looga dhigay oo loo adeegsaday ujeedada hirgelinta socdaalka, iyada oo kor loo qaadayo ammaankooda, noloshooda, wadashaqeyn aan sharciyeysneyn oo u dhexeysa maamulayaasha DMV iyo ICE, waxayna khatar gelineysaa in laga tago qoyskooda.
Yesenia Beascochea, Hogaanka Abaabulka Bulshada ee Xarunta Horumarinta Caafimaadka iyo xubin hormood ka ah isbahaysiga I Drive:
“Intii lagu gudajiray cudurkan faafa, waxaa muuqata in sidii hore aaney dadku ku kalsoonayn nidaamka sababtoo ah cabsida laga qabo in adeegyadu helaan macluumaadkooda. Iyada oo la heli karo tallaalka, immisa qof ayaa diyaar u ah inay galaan tallaalka, haddii biilkani aanu dhaafi doonin? Immisa qof ayaa tagaya oo ka helaya taageerada carruurtooda dugsiyada, haddii biilkani aanu dhaafi doonin? Immisa qof ayaa aan heli doonin cuntada? Waxaan si toos ah ula shaqeeyaa bangiyada cuntada halkan maxaliga ah ee Pueblo. Waxaanan arkay dadka, gaar ahaan bulshada soogalootiga ah, oo aan doonaynin inay aadaan bangiyada cuntada maxaa yeelay waxay ka baqayaan in macluumaadka lala wadaago socdaalka. ”
Maria Albañil-Rangel, Isuduwaha U doodista Muhaajiriinta ee Shabakadda Caafimaadka ee Tri-County:
Bulshada soogalootiga ah ayaa ka labalabeynaysa inay helaan adeegyo ay aad ugu baahnaayeen tanina waxay dhaawac ku tahay ladnaanta qoysaskooda. Dadku way baqayaan waxayna go'aansanayaan inay ka fogaadaan waxtarka dadweynaha ee ay xaq u leeyihiin. Marar dhowr ah, dadku waxay ka baqayaan inay gaaraan oo ay helaan adeegyada caafimaadka maskaxda, inay ka qoraan carruurtooda xanaano-maalmeedka ama xitaa inay siiyaan macluumaadkooda xarumaha bangiyada cuntada. Had iyo jeer waxaa jira su’aal ah - Kumaa helaya macluumaadkeyga? Maxaa dhacaya haddii aan la wadaago macluumaadkayga? Tani waxay ku keenaysaa saameyn musiibo ah bulshada soo galootiga ah gaar ahaan waqtigan cudurka faafa ee COVID-19. Qofna waa inuusan ka baqin inuu helo adeegyo aad loogu baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay sharciyo ilaaliya xuquuqda iyo ladnaanta dhammaan dadka reer Coloradans. Waa inaan dhisnaa kalsoonida beesheena.
Arash Jahanian, Agaasimaha Siyaasadda iyo Dacwadaha Xuquuqda Madaniga ah ee Xafiiska Meyer Law Office: “Hindise sharciyeedkani wuxuu ku saabsan yahay nabadgelyada bulshada iyo ladnaanta. Waxay dejineysaa habab lagu hubinayo in macluumaadka shaqsiyadeed ee loo yaqaan 'Coloradans' loo isticmaalo in lagu xoojiyo nabadgelyada iyo ladnaanta halkii laga dhaawici lahaa bulshada. Markay Coloradans 'ku aaminaan dawladda macluumaadkooda shaqsiyadeed, waxay filayaan in macluumaadka la ilaalin doono. Filashadaas asturnaanta waxay ka timaaddaa dastuurka gobolka iyo federaalka. Ma filayaan, mana u qalmaan, in saraakiisha gobolka ay qaadan doonaan macluumaadkaas oo ay ku wareejin doonaan ICE. ”
Sharciga ayaa fariin cad u diraya bulshada: saraakiisha gobolka ayaa halkan u jooga inay kuugu adeegaan ruqsadaha darawalnimada, talaalada, iyo adeegyada kale. Waxay hubisaa in xubnaha bulshada soogalootiga ah aysan dib ugu laaban hooska, taa badalkeedana ay si buuxda uga mid noqdaan bulshada dhexdeeda, taasoo ka dhigeysa bulshada Colorado inay sii xoogaysato guud ahaan. ”
Mercedes Garcia, xubin hore uga tirsanaan jirtay Golaha CIRC:
Ma awoodin inaan helo rukhsad, maxaa yeelay waxaan ka baqayaa. Sideen ku helayaa Aqoonsiga Colorado, markay taasi tahay cabsidayda ugu daran, ee ah in DMV ay macluumaadkeyga heyso oo ay la wadaagi doonto ICE? Waxyaabo badan ayaa igu dhacay maxaa yeelay ma aanan haysan shati. Markii ay [muwaadinteyda] yar yarayd, ma aysan heli karin Aqoonsiga Colorado, maxaa yeelay ma haysto mid. Waxay ahayd inaan sugno illaa gabadhayda ugu weyn ay sideed iyo toban jirsato si ay u hesho mid. Tani sax maahan Waxaan gacan ka geysaneynaa taageerida waddankan, waxaana si joogto ah noogu silciyaa ICE. Dembigeenna kaliya ayaa halkan ku nool, oo aan la diiwaangelin.
I Drive Colorado waa isbahaysi ka kooban in ka badan 20 urur oo u ololeeya soogalootiga oo ka kala yimid daafaha gobolka Colorado oo maalgashaday hirgelinta iyo hagaajinta barnaamijka SB251, oo ku dhiirrigeliya dhammaan Coloradans, iyadoon loo eegin heerka, inay helaan liisanka darawalnimada.
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu cambaareynayaa isku daygii afgambi ee 1/6/21, wuxuu ku baaqayaa isla xisaabtan iyo caddaalad.
ICE waxay ku sameysay qasab qasab qas ah muhaajiriinta la xiray
Bayaanka Wadajirka ah: AFSC iyo CIRC waxay cambaareynayaan go'aanka maxkamadda ee ah in laga xayuubiyo xaaladda dadka haysta TPS, Waxay Golaha ugu yeerayaan inay sharci yeeshaan